सामाजिक सुरक्षा : सयौं मध्येको एक काम ! - Sadrishya
सामाजिक सुरक्षा : सयौं मध्येको एक काम !
अश्विनकुमार पुडाशैनी Dec 02, 2018
उद्यमशिलता र सृजनशिलता श्रमबाट मात्रै आउँछ । भविष्य सुरक्षित राख्न घुस खान पर्दैन । श्रम गरे पुग्छ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । २०४७ सालको परिवर्तन पश्चात नै आउनुपर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था आउन गणतन्त्रनै कुर्नुपर्यो । यसले देखाउँछ हाम्रो पछौटपन । हाम्रो औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिक संगठन र व्यवस्थापन बीचको द्वन्द्वका कारण कतिपय उद्योगहरु नै बन्द हुने अबस्थामा पुग्यो ।
नयाँ युगमा गर्नुपर्ने सयौं काम मध्येको एक काम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भमा तामझाम गर्ने विषय सामान्य हो । अब प्रत्येक कार्यक्रम युग परिवर्तनको सन्देश सहित जनतामा जागरण जगाउने किसिमले प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ । हो नेपाल नयाँ युगमा छ ।
नयाँ युगमा सरकारले गर्नुपर्ने सयौं काम मध्येको एउटा काम हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । अहिले घोषणा भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रतिफल आउन अर्को १५ बर्ष लाग्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको तस्वीर सहितको प्रस्तुति र युग परिवर्तनको विषयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचार प्रसारको शैली हेर्दा केहि सिमित व्यक्तिहरुले कार्यकारी प्रमुखको इमेजलाई नै आफ्नो व्यवसायिक एवं व्यापारिक लाभको लागि दुरुपयोग गरेकोझै देखिएको छ ।
मंसिर ११ श्रमिकहरुको लागि ऐतिहासिक दिन
२०७५ मंसिर ११ गते मंगलबार एक ऐतिहासिक दिन हो । नेपालमा श्रमिकहरुको लागि युग परिवर्तनको दिन भन्दा हुन्छ । यो दिन सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको घोषणा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाईएको दिन हो । सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मूल मर्मबाट स्थापना गरिएको योसामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको सुरुवात नेपालका सबै संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु,रोजगारदाता र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो दिन प्रत्येक नागरिकहरुलाई श्रम प्रति सम्मान गरौं । जीवन भनेकै श्रम गर्ने श्रमको सम्मान गर्ने र शुखपुर्वक सुरक्षित बुढ्यौली जीवन विताउने संकल्प गर्ने दिनको रुपमा मनाउने परम्परा गर्नुपर्छ ।
यो दिन नागरिक देखि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्मले श्रमको सम्मान गर्ने कार्य गरेको सबैले अनुभूति गर्ने किसिमले अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । घरको काम, खेतबारीको काम कार्यालयको काम सार्वजनिक काम वा कुनैपनि काम सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन भन्ने प्रत्येक नागरिकमा श्रमको सम्मान गर्दै श्रम गर्ने अभ्यास गर्ने दिनको रुपमा मनाउने संस्कृति बनाउनु पर्दछ ।
उद्यमशिलता र सृजनशिलता श्रमबाट मात्रै आउँछ । भविष्य सुरक्षित राख्न घुस खान पर्दैन । श्रम गरे पुग्छ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । २०४७ सालको परिवर्तन पश्चात नै आउनुपर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था आउन गणतन्त्र नै कुर्नु पर्यो । यसले देखाउँछ हाम्रो पछौटपन । हाम्रो औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिक संगठन र व्यवस्थापन बीचको द्धन्द्धका कारण कतिपय उद्योगहरु नै बन्द हुने अबस्थामा पुग्यो । श्रमिकहरुले आफ्नो पेशा प्रति सुरक्षित अनुभूति गर्ने वातावरणको सुरुवात भएको छ । अब औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिक र व्यवस्थापन बीचको अस्वभाविक द्धन्द्धको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको एउटै स्वर योगदानमा आधारीत पेन्सन कोषको घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा एक भव्य समारोहका बीच शुभारम्भ गरे। यो कार्यक्रम आफैंमा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन्यो । कार्यक्रममा सरकार, श्रमिक संगठन ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु र रोजगारदाता नीजि क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीहरुका प्रतिनिधिहरुले एकै स्वरमा भने “हामीले बषौं देखि खोजेको श्रमिकहरुको सुरक्षा ,असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्वको बारेमा संवोधन गर्ने सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले आज सार्थकता पाएको छ । सपना विपनामा रुपान्तरित भएको छ ।” अब यो कार्यक्रम भएपछि नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा ताला लाग्ने छैन । अब औद्योगि प्रतिष्ठानहरु बन्द हुने छैनन् । यो नेपालको सन्दर्भमा एक ऐतिहासिक उपलब्धी हो ।
संविधान, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, कोष सञ्चालक समिति र बजेटमा भएको व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य संबन्धि व्यवस्थाको धारा ३४ मा श्रमको हकमा भनिएको छ “प्रत्येक श्रमिक (श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर )लाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुबिधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।”संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले २०७४ साउन २९ गते प्रमाणिकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बनाएको छ । जसमा भनिएको छ श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संबन्धमा व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐनबनाएको हो ।
२०७५ को बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ “सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरि रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायारा फराकिलो बनाउँन एकिकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।”सम्बत २०७५ साल साउन १ गते दखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागु गरिने छ । योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिने छ । असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ । सामाजिक स७३घढसरक्षाको दायरामा रहेका कुनैपनिव्यक्तिले दोहोरो सुबिधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ तयार भै
कार्यसञ्चालन सुरु भएको छ ।
कोषको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि श्रम सचिबको अध्यक्षतामा चार बर्षे कार्यकाल भएको सञ्चालक समिति गठन भएको छ । जसमा डेपुटी गभर्नर, अर्थ,कानुन, सहकारी मन्त्रालय र योजना आयोगका एक–एक जना सहसचिवहरु ट्रेड युनियन महासघ मध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला सहित तीन जना प्रतिनिधि र एक कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल श्रम मन्त्रलयका सहसचिव कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् ।
केके छन् योजनाहरु :
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, बृद्धाअबस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वेरोजगार सहायता योजनाहरु रहेका छन् ।
कोष सञ्चालनका चुनौतीहरू
ऐतिहासिक उपलब्धी सहितको यो कोष सञ्चालन आफैंमा एक चुनौती हो । यो कोषमा दशबर्ष भित्रमा खर्बौ रकम जम्मा हुन्छ । कोषको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती भएको सबै विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । अब कोषको कार्यक्रम कसरी बन्छ । यसको सञ्चालक हुनेहरु पदेन रहने व्यवस्था छ । यसको कार्यकारी प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति हो । के कति व्यावसायीक, पारदर्शि र क्रेडिविलिटि भएको व्यक्ति नियुक्त हुन्छ त्यसले कोषको भविष्यलाई प्रभाव पार्छ ।अहिले सरकारको पहिलो चुनौती त्यहि हो । दोस्रो भनेको विश्वसनियता सरकारको जिम्मामा श्रमिक क एवं कामदारहरुले के कसरी विश्वास गर्छन् । नीजिक्षेत्रलाई विश्वास दिन सक्नु अर्को चुनौती हो । हुन त यो कार्यक्रमको प्रचार प्रसार भएको विषय आलोचनाको विषय बन्यो तर यसलाई त्यत्ति नै प्रवद्धनले पुग्दैन । अझै यो कोषको स्कीमको बारेमा संगठित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । पर्याप्त जानकारी दिनुपर्छ । आकर्षित गर्नु पर्छ र सहभागिता बढाउनु पर्छ । नगद व्यवस्थापन । लगानी नीति तथा कार्यक्रम र कोष(फण्ड) को व्यवस्थापन गर्न व्यावसायीक किसिमले चलेका नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अनुभवको आधारमा नयाँ किसिमको कार्यक्रम सहित कोषका परिचालन गर्ने सुनिस्चितता गर्नुपर्छ । अनौपचारीक क्षेत्रमा अर्थात किसान एवं स्वरोजगारमा संलग्नहरुलाई सहभागि गराउनु अर्को चुनौती हो । चुनौती नै चुनौतीका बीच सहभागिता योगदान र सामाजिक सुरक्षा सहितको ऐतिहासिक उपलब्धीलाई सफल बनाउनु सबै नागरिकहरुको सुखद भविष्यको आधारशिला हो ।
नयाँ युगको सन्देश
नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात भनेको नेपालका नागरिकहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत आफ्नो संविधान आफैं जारी गरि त्यसले गरेको व्यवस्था अनुरुप राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको संक्रमणकालको अन्त्य भई राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएको दिन २०७४ साल फाल्गुन ३ गते विहिबार हो । संसारमा भएका ठुला ठुला परिवर्तनहरु लाई नै युग परिवर्तन भन्ने गरिन्छ । नेपालमा झण्डै २४० बर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भई जनताले आफ७त्रगयतसले छानेको प्रतिनिधि कार्यकारी प्रमुख भएको समय नै युग परिवर्तनको मूल सर्त हो ।
बुद्धिजिविहरुको बुद्धिमा बिर्को लगाउने कोशिस गरिएन भने नेपाल अहिले नयाँ युगमा छ । यो युग परिवर्तनका नायकहरु थुप्रै छन् । हजारौंको बलिदानी र जीवन उत्सर्गबाट युगको परिवर्तन भएको हो । यो समय नै नेपालमा नयाँ युगको सुरुवातको दिन हो । दायित्व प्रमुख कार्यकारीको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्थानमा अन्य कोही पनि व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधिको रुपमा देशको कार्यकारी प्रमुखको बागडोर सम्हालेको दिन नै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दिन हो । युग परिवर्तनको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने ।युगलाई नै नयाँ दिशामा हिडाउँने, नयाँ दिशा दिने, र नयाँ युग हाँक्ने र प्रवद्धन गर्ने दायित्व भनेको देशको कार्यकारी प्रमुखको हो । कार्यकारी प्रमुखले युग परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्ने हो । व्यापार व्यावसायको आफ्नो उत्पादन वा सेवा वा सामानको प्रवद्धन गर्न संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तस्वीर सहितको सेवा सुबिधाको सन्देश छापिने विज्ञापनहरु जस्तै हो । प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै हो ।
नेपाल नयाँ युगमा छ । यो प्रचार अझै गाउँ गाउँ पुग्न सकेको छैन । नागरिकहरुलाई हामी नयाँ युगमा छौं भन्ने विषय बुझाउने पहिलो दायित्व भनेको कार्यकारी प्रमुखको हो । नयाँ युगमा ओली सरकारले गर्नुपर्ने सयौं कार्यक्रमहरु छन् त्यसमध्येको गर्नै पर्ने कामहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम जस्तै केहि कार्यक्रमहरुको बारेमा यहाँ केहि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक लागेर ती कार्यक्रमहरुको चर्चा गरिएको छ ।
नरोकियोस् फाष्ट ट्रयाक
नेपाली सेनाले शुरु गरिरहेको फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य जग्गा दलालि र विचौलियाहरुको चहलपहलमा अबरोध उत्पन्न हुन लागेको छ । विभिन्न बहानामा यस्ता ऐतिहासिक काममा सेनालाई अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो कामको नतिजाबाट भविष्यमा हाम्रा ठुला -ठुला विकास आयोजनाका कामहरु सेनाबाट गराउनु पर्छ । विकास विरोधी र सधैं आफ्नो लाभको लागि मात्रै हिड्ने भिआपिहरुले यो काम रोक्न प्रयन्त गरिरहेका छन् । सरकार सचेत हुनु पर्छ । सेनाबाट समय सिमा भित्रै अविच्छिन्न रुपमा कामगर्ने वातावरण दिएर नयाँ युगमा यो काम पुरा गर्नुपर्छ । नेपाल नयाँ युगमा छ भन्ने सन्देश दिन पनि जति सक्दो छिटो फाष्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । काममा आबरोध गर्नु हुदैन ।
अघि बढाऔ बुढी गण्डकी आयोजना
आम जनताले पेट्रोल खपतमा अतिरिक्त शुल्क तिरेर २०औं अरव मुआव्जा दिईसकेको बुढी गण्डकी बिधुत आयोजना यो वा त्यो वहानामा ढिला भईरहेको छ ।यसलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन७३घढस पर्छ । नेपाल नयाँ युगमा छ भन्ने सन्देश दिन पनि जति सक्दो छिटो बुढी गण्डकि बिद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो अर्को नयाँ युग सुरुवातको सन्देश दिने आयोजना हो ।
भट्टेडाँडा काटेर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
पहाड काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो देश पहाडै पहाडको देश हो । हाम्रा पहाडहरु नै हुन प्रमुख प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका । अहिलेको काठमाण्डौको नजिकैका कुनै डाँडा काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । ललितपुरको ज्यामिरेटार पुगेर हेर्दा भट्टे डाँडा काटेर ज्यामिरेटार र भट्टेडाँडाले नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र नयाँ शहरको स्वरुप दिन सक्छ । जसरी समुन्द्र हुनेले समुन्द्र पुरेर निर्माण गर्छन् । हामी पनि पहाड काटेर विकास गर्न अगाडि बढ्नु पर्छ । नयाँ युगको सुरुवात यसरी गर्न सकिन्छ । यो अर्को परियोजनाको नयाँ युगमा नेपाल भएको सन्देश दिने कार्यक्रम । छिटो भन्दा छिटो पाँचसय डोजर लगाएर यो पहाड काट्न सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई अगाडि बढाए एक बर्ष भित्रै नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणगरि नयाँ युगको सुरुवातको सन्देश दिन सक्छौ नागरिकलाई ।
जोमसोम–कोराला नयाँ शहर
उत्तरतर्फको चिनियाँ नाका कोरालापास पुगेर भर्खरै फर्केका एक अध्येताले यो पञ्तीकारसँग भने “तपाई नयाँ य७३घढसगमा नेपाल भन्ने कुराको प्रबद्र्धन गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ युगमा नेपालको लागि कोरालापास देखि जोमसोम सम्म विशाल हाईवे निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । त्यसको दुवै तिर विशाल अत्याधुनिक आकर्षित नेपालको कला संस्कृति र परम्परा झल्कने पर्यटकिय बस्ती सहितको नयाँ शहर निर्माण गर्न सुझाउनु होस् । त्यहि हो नेपाल नयाँ युगमा भएको सन्देश दिने सुन्दर परियोजना ।” उनको यो सुझाव मननिय छ ।
सृजनशील कार्यक्रम र नविन सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ युगमा यस्ता सृजनशील युवाहरुको अबधारणाहरु सुन्ने बानि गरे भने नागरिकलाई नयाँ सन्देश दिन सक्छन् नयाँयुगमा ।
प्रत्येक नेपालीको बैंकखातामा सरकारको सहभागिता
ओली सरकारले बजेट मार्फत सबै स्थानिय तहमा बैंकशाखा पुर्याउने प्रतिवद्धता सहित बैंकका शाखाहरु विस्तार भै रहेका छन् । अझै सबै स्थानियतहमा बैंक पुग्न सकेको छैन । यो संगै जोडिएको विषय भनेको नयाँ युगमा नेपालका सबै नागरिकहरुको बैंक खाता र उक्त खातामा
सरकारको १०० रुपैयाँ अभियान सुरु गर्न सकेमा सरकारले नागरिकहरुको बैंकिङ्ग पहुँचचताको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । यो अभियान चलाई सबै नागरिकहरुमा नयाँ युगको सन्देश पुर्याउन न सक्छ ओली सरकारले । यो कुनै चुनौतीको काम नै होईन भारतमा मोदिले यसमा सफलता पाईसकेका छन् ।
प्रत्येक नागरिकलाई कर परिचयपत्र
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर त्यो कार्यक्रमलाई बषौं लाग्छ । अब छोटो एवं प्रभावकारी कार्यक्रम देश विकासमा नागरिकहरुको सहभागिता बढाउन प्रत्येक नागरिकलाई कर परिचयपत्र अर्को नयाँ युगको सन्देश दिने कार्यक्रम बन्न सक्छ । यो पनि सरल तरिका छ । हाम्रा अर्थमन्त्री करको दायरामा अत्याधिक नागरिकहरुलाई समेट्ने भन्दैछन् । यो अभियान अगाडि बढाउन सकेमा नागरिकहरुले पाउनेछन् नयाँ युको नयाँ सन्देश । आफैं सहभागि हुने कार्यक्रममा नागरिकहरुको चासो छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिनुपर्छ नागरिकहरुलाई नयाँ युगको सन्देश ।
नेपाली नागरिक शिक्षित अभियान
प्रत्येक नागरिक शिक्षित अभियान ओली सरकारले यसबर्ष नयाँ बर्षको दिन रारा तालको किनारामा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यो कार्यक्रम एक तहसम्म नयाँ युगको अभियान सहितको सन्देश थियो । अबको नयाँ बर्षमा ओलीले नेपालका सम्पूर्ण ७५३ पालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाली नागरिक शिक्षित महाअभियान नाममा स्वयंसेवीको रुपमा महिला जनप्रतिनिधि परिचालन गरे भने आगामी २०७६ भित्रमा नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरु साक्षर बनाउँन सकिन्छ । नयाँ बर्षमा नयाँ युगको सन्देश सहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्न ढिलो भैसकेको छ । विचौलीयाहरुले दुरुपयोग गरेनन् भने ओलीले यस्ता नविन कार्यक्रमहरु बुझ्ने त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् राजनीतिक विश्लेष्क ।
जाँड रक्सी बन्द गरौं अभियान
नयाँ युगमा जाँड रक्सी बन्ध गरौं । यो अभियान सुरु गर्नपुर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कम्मर कसेर लागेका छन् । तर उनको यो अभियानले नेपाल नयाँ युगमा भएको सन्देश अभियानको रुपमा अगाडि लैजान सकिन्छ । सरकारले यो कुरो सुन्न सकेमा नेपाल नयाँ युगमा भएको जागरण ल्याउन सकिन्छ । स्लामिक राष्ट्रहरुमा भएको राम्रोकामको कानुनको हामीले पनि अबलम्बन गर्न सकेमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ । नयाँ युगमा ओली सरकारले सञ्चालन गर्ने नविन कार्यक्रमहरु, आयोजना तथा परियोजनाहरुको काममा सुशासन कायम गर्दै पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, उत्तरदायित्ववोध सहित सम्भब गर्नु पर्छ नयाँ युगको सन्देश प्रवाह । नयाँ युगमा नयाँ कार्यक्रमहरु सहित सबै नेपालीमा युग परिवर्तनको सन्देश प्रवाह हुन सकोस् । शुभकामना !
प्रजातन्त्र जीवनमरणको सवाल